Kenya oo Ugoodisay Soomaaliya “kama baxeyno Soomaaliya inta Al-shabaab ka dhameyneyno”
By WARIYAHA CAALAMKA On Sep 12, 2019 Last updated Sep 12, 2019
Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo dheer kaddib ka hadlay mowqifka dowladda Kenya ee ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya.
Uhuru Kenyatta ayaa sheegay. In Ciidamada Kenya ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab ka wada Soomaaliya. Ayaa sheegay in marnaba Ciidamada Kenya aysan ka baxeyn Soomaaliya ilaa ay AL-shabaab iska dhiibaan sida uu hadalka u dhigay.
Mr Kenyatta ayaa sheegay in Ciidamada Difaaca Kenya ay sii wadi doonaan. Ka hoos shaqeynta AMISOM ilaa Soomaaliya ay nabad ka noqoto.
Waxaa kale oo uu intaas raaciyay in Howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya uu yahay mid waxa loogu yeero argagixisada ka hortaagan Gobolka loona baahanyahay in la sii wado.
Hadalka Kenyatta ayaa waxaa uu ku soo aadayaa iyada oo Kenya dhawaan ku fashilantay qaraar ay ku dooneysay in Al-shabaab lagu geliyo Qodobka 1267 kaas oo qaba in goobaha AL-shabaab ku suganyihiin gargaar la gaarsiin karin lana beegsan karo cidkasta oo halkaas ku nool.
Dowladda Soomaaliya ayaa uga guuleysatay Kenya. Qaraarkaas waxaana Golaha diideen soo jeedinta Kenya.
Soomaaliya ayaa taas beddelkeeda soo jeedisay. In Kenya joojiso dhoofinta dhuxusha ee Kismaayo oo ay sheegtay in Al-shabaab dhaqaale ka helaan.
Labada Dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa u dhaxeeya muran badeed kaddib markii ay Kenya sheegatay qeyb ka mid ah biyaha Soomaaliya taas oo sababtay in dowladda Soomaaliya ay sanadkii 2014kii Kenya ka dacweysay Maxkamadda ICJ.
Dhegeysiga kiiskaas ugu dambeeya ayaa waxaa Maxkamaddu sheegtay in la qabanayo 4ta November ee sanadkan.